သူများနဲ့မတူဘဲ နှစ်ဦးအလှူလေးကို အမွန်မြတ်ဆုံး အလှူလေးအဖြစ်ပြုလုပ်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ဆုပန်ထွာ – Askstyle
သူများနဲ့မတူဘဲ နှစ်ဦးအလှူလေးကို အမွန်မြတ်ဆုံး အလှူလေးအဖြစ်ပြုလုပ်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ဆုပန်ထွာ
Cele Active World ပရိသတ္ႀကီးေရ မင္းသမီး ဆုပန္ထြာကိုေတာ့ အထူးအေထြမိတ္ဆက္ေပးစရာမလိုေအာင္ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးၿပီးသားျဖစ္မယ္ ထင္ပါတယ္.။ ဆုပန္ထြာကေတာ့ အိမ္ေထာင္က်ၿပီးေနာက္မွာလည္း သားေလးတစ္ဦးရွိေပမယ့္လည္း မိခင္တာဝန္၊ ဇနီးမယားတာဝန္ေတြနဲ႕အတူ ပရိသတ္ေတြခ်စ္တဲ့ အႏုပညာရွင္တစ္ေယာက္အေနနဲ႕ပါ တာဝန္ေက်ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူပါေနာ္.။
ေပ်ာ္ရႊင္တဲ့ မိသားစုေလးနဲ႕အတူ ေပ်ာ္ရႊင္တဲ့ ေန႕ရက္ေတြကို ပိုင္ဆိုင္ထားသူ ဆုပန္ထြာကေတာ့ ဘာသာေရးနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး လွဴဒါန္းမႈေတြကိုလည္း လုပ္ေဆာင္တတ္သူပါ.။ ဇန္နဝါရီလ (၆)ရက္ေန႕မွာေတာ့ သူမတို႕ မိသားစုရဲ႕ ႏွစ္ဦးအလွဴအျဖစ္လုပ္တဲ့ အလွဴေလးကို “6.1.2021 ကိုယ့္လက္ထဲ “မဟာသမယသုတ္ ျမန္မာအသံထြက္ လက္ကမ္းစာအုပ္ေလး” ေတြေရာက္လာခဲ့တဲ့ေန႔ေလး။ လႉခြင့္ရသြားတဲ့ေန႔ေလး။ပီတိျဖစ္ၿပီး‌ ေပ်ာ္သြားတဲ့ေန႔ေလး။ ဒီေန႔ ဒီ “မဟာသမယသုတ္” ျမန္မာအသံထြက္ေလးကို အလြတ္က်က္မွတ္လို႔ရတဲ့လက္ကမ္းစာ႐ြက္ေလး လႉဖို႔ႀကိဳးစားခဲ့ရတာ 7လေလာက္ၾကာခဲ့ပါၿပီ။
ပန္ပန႔္အတြက္ ဒီ လက္ကမ္း”မဟာသမယသုတ္ ျမန္မာအသံထြက္” စာ႐ြက္ေလးက တန္ဖိုးရွိလွပါတယ္။(“မဟာသမယသုတ္ပါဠိ” လိုလည္းပါပါတယ္ေနာ္) ဘယ္လိုပဲ ခက္ခဲပါေစ “မဟာသမယသုတ္ ျမန္မာအသံထြက္ ” လႉႏိုင္ၿပီမို႔ ဝမ္းသာပီတိမ်ားစြာနဲ႔ပါ။ လိုခ်င္တဲ့သူတိုင္းကို ပန္ပန္တို႔ မိသားစု လႉပါမယ္။ မိသားစု 2021 ႏွစ္ဦးအလႉေလးပါေနာ္။ အိမ္မွာလာယူလည္းတစ္ေယာက္ကိုတစ္ခုစီလႉပါမယ္။ ေပးပါမယ္။ ပန္ပန္ Live Sale ေရာင္းရင္လည္း ဘာပစၥည္းပဲေရာင္းေရာင္း၊ ဘယ္သူေတြပဲဝယ္ဝယ္ “မဟာသမယသုတ္ ပါဠိ၊ျမန္မာအသံထြက္” လိုခ်င္သူ၊႐ြတ္ခ်င္သူေတြကို လက္ကမ္းေလးေတြထည့္ေပးပါ့မယ္ရွင့္။
အိမ္မွာလာယူခ်င္တဲ့သူမ်ားအတြက္ ပန္ပန႔္လိပ္စာေလးပါ။ ဆုပန္ထြာ ၁၁၂/D, ေ႐ႊႏွင္းဆီကန္လမ္း၊ ၉မိုင္၊မရမ္းကုန္း။ Supan Htwar 112/D,Shwe Hnin Si Kan Road,9 Miles, Mayangone Township. #မိသားစုႏွစ္ဦးအလႉ# #မဟာသမယသုတ္ျမန္မာအသံထြက္ # #ဆုပန္ထြာ #SupanHtwar” ဆိုၿပီး သူမရဲ႕ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာေပၚမွာ တင္လာခဲ့တာေလးကို ျပန္လည္မွ်ေဝေပးလိုက္ရပါတယ္ေနာ္..။ ဖတ္ရႈ႕ေပးခဲ့ၾကတဲ့ Cele Active World ပရိသတ္ႀကီးလည္း ေပ်ာ္ရႊင္သာယာတဲ့ ေန႕ေလးတစ္ေန႕ကို ပိုင္ဆိုင္ႏိ္ုင္ၾကပါေစလို႕ ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္.။
“သူများနဲ့မတူဘဲ နှစ်ဦးအလှူလေးကို အမွန်မြတ်ဆုံး အလှူလေးအဖြစ်ပြုလုပ်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ဆုပန်ထွာ”
Cele Active World ပရိသတ်ကြီးရေ မင်းသမီး ဆုပန်ထွာကိုတော့ အထူးအထွေမိတ်ဆက်ပေးစရာမလိုအောင် ချစ်ခင်ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်.။ ဆုပန်ထွာကတော့ အိမ်ထောင်ကျပြီးနောက်မှာလည်း သားလေးတစ်ဦးရှိပေမယ့်လည်း မိခင်တာဝန်၊ ဇနီးမယားတာဝန်တွေနဲ့အတူ ပရိသတ်တွေချစ်တဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ပါ တာဝန်ကျေအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်သူပါနော်.။
ပျော်ရွှင်တဲ့ မိသားစုလေးနဲ့အတူ ပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့ရက်တွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူ ဆုပန်ထွာကတော့ ဘာသာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လှူဒါန်းမှုတွေကိုလည်း လုပ်ဆောင်တတ်သူပါ.။ ဇန်နဝါရီလ (၆)ရက်နေ့မှာတော့ သူမတို့ မိသားစုရဲ့ နှစ်ဦးအလှူအဖြစ်လုပ်တဲ့ အလှူလေးကို “6.1.2021 ကိုယ့်လက်ထဲ “မဟာသမယသုတ် မြန်မာအသံထွက် လက်ကမ်းစာအုပ်လေး” တွေရောက်လာခဲ့တဲ့နေ့လေး။ လှူခွင့်ရသွားတဲ့နေ့လေး။ပီတိဖြစ်ပြီး‌ ပျော်သွားတဲ့နေ့လေး။ ဒီနေ့ ဒီ “မဟာသမယသုတ်” မြန်မာအသံထွက်လေးကို အလွတ်ကျက်မှတ်လို့ရတဲ့လက်ကမ်းစာရွက်လေး လှူဖို့ကြိုးစားခဲ့ရတာ 7လလောက်ကြာခဲ့ပါပြီ။
ပန်ပန့်အတွက် ဒီ လက်ကမ်း”မဟာသမယသုတ် မြန်မာအသံထွက်” စာရွက်လေးက တန်ဖိုးရှိလှပါတယ်။(“မဟာသမယသုတ်ပါဠိ” လိုလည်းပါပါတယ်နော်) ဘယ်လိုပဲ ခက်ခဲပါစေ “မဟာသမယသုတ် မြန်မာအသံထွက် ” လှူနိုင်ပြီမို့ ဝမ်းသာပီတိများစွာနဲ့ပါ။ လိုချင်တဲ့သူတိုင်းကို ပန်ပန်တို့ မိသားစု လှူပါမယ်။ မိသားစု 2021 နှစ်ဦးအလှူလေးပါနော်။ အိမ်မှာလာယူလည်းတစ်ယောက်ကိုတစ်ခုစီလှူပါမယ်။ ပေးပါမယ်။ ပန်ပန် Live Sale ရောင်းရင်လည်း ဘာပစ္စည်းပဲရောင်းရောင်း၊ ဘယ်သူတွေပဲဝယ်ဝယ် “မဟာသမယသုတ် ပါဠိ၊မြန်မာအသံထွက်” လိုချင်သူ၊ရွတ်ချင်သူတွေကို လက်ကမ်းလေးတွေထည့်ပေးပါ့မယ်ရှင့်။
အိမ်မှာလာယူချင်တဲ့သူများအတွက် ပန်ပန့်လိပ်စာလေးပါ။ ဆုပန်ထွာ ၁၁၂/D, ရွှေနှင်းဆီကန်လမ်း၊ ၉မိုင်၊မရမ်းကုန်း။ Supan Htwar 112/D,Shwe Hnin Si Kan Road,9 Miles, Mayangone Township. #မိသားစုနှစ်ဦးအလှူ# #မဟာသမယသုတ်မြန်မာအသံထွက် # #ဆုပန်ထွာ #SupanHtwar” ဆိုပြီး သူမရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်လာခဲ့တာလေးကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ရပါတယ်နော်..။ ဖတ်ရှု့ပေးခဲ့ကြတဲ့ Cele Active World ပရိသတ်ကြီးလည်း ပျော်ရွှင်သာယာတဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်.။